Kubadda Somali Sport Portal > Article > About Somalia
Current Articles Archives Search About Somalia
Soonku waa bisha Sagaalaad ee calendar-ka Islamka, Wuxuuna ka mid yahay shanta tiir ee Islamka asagoo kaga jira kaalinta Afaraad. Soonku luqad ahaan waa in wax laga reebtoonaado oo aan la sameyn. Shar...
Posted in About Somalia, Education, Somalia
Isboortigu wuxuu qayb ka qaadan karaa horumarinta tayada nolosha qofka ama bulshadda. Isboortigu wuxuu kaalmeeyaa is-fahamka, iyo dulqaadka, wuxuu ka hortagaa xanuunadda bulshadda sida mukhadaraadka, ...
Sixteen-year-old Somalia-born schoolboy Abdul Abubakar took first prize at the finals of the 19th European Union Contest for Young Scientists in Valencia last week. Sixteen-year-old Somalia-born schoo...
Sakaatul Fidrigu Waa Cibaado ilaahay loogu dhawaanayo waxayna la xidhidhaa Soonka. Soonka oo Ajarkiisa ilaahay yiri “Soonka anigaa iska leh anigaana ka abaal marinaya Adoomaha dartey u soomey&rd...
Posted in About Somalia, History, Somalia